Games Kharido Na Apk Download N'ihi na gam akporo - Luso Gamer
Games Kharido Na ngwa Download N'ihi na gam akporo
Nwere ike 14, 2021 February 17, 2021 by John Smith
Ngwuregwu egwuregwu ọhụụ na-ewu ewu n'etiti ndị egwuregwu Garena Free Fire. Ee, anyị na-ekwu maka egwuregwu Kharido. Iji ikpo okwu, FF Player nwere ike irite ihe ruru 100% diamonds ego n'efu. Ọ bụrụ na ị dị njikere irite ndị diamonds karịa wụnye Games Kharido In Apk.
Inside Free Fire, diamonds na-ahụta dị ka ego kachasị adị iji kpughee ma ọ bụ zụta ngwaahịa egwuregwu dị iche iche n'ime Free Fire. Nke gunyere Skins, Effects, Weapon and Emotes wdg. Ọ bụ ezie na n'ime egwuregwu dị iche iche, Skins na mmetụta na-eji na-egosi ha pụrụ iche ekwekọghị.
Mana mgbe anyị na-ekwu maka Garena Free Fire karịa n’ime egwuregwu a. Skins na Mmetụta ndị a na-arụ ọrụ dị mkpa n'imeri onye iro. Ndị ọhụrụ na mbido na-esonye n'ime egwuregwu nwere ike ịnweta naanị akụrụngwa.
Iji nweta ma mepee ihe ndi ozo, ndi choro choro imeghe oghere di iche iche na onyinye. Ebe ohere inweta ihe di iche iche di ka Skins na Effects di elu. Mgbe anyị sonyere ma kpọọ egwuregwu n'ime ngwaọrụ dị iche iche.
Anyị hụrụ ụzọ abụọ dị iche iche nke inweta daịamọnd. Ma ndị gamers nwere ike irite diamond site na igwu egwuregwu ahụ mgbe niile, nke bụ usoro dị ogologo. Nhọrọ nke ozo choro ezigbo ego dika ego iji nweta ola diamond ahu.
N'ezie, ọ bụ usoro dị oke ọnụ ma ọtụtụ ndị na-egwu egwuregwu na-ezere ịzụta diamonds ahụ. Ya mere n'ilekwasị anya na nsogbu mmeghe, ndị mmepe wepụtara ohere ọhụrụ a. Maka inweta ego zuru oke ịhọrọ ngwugwu ọ bụla.
Anyị ga-akọwa usoro ịzụrụ diamonds tinyere 100% ego karịa nke mbụ Top Up. Ya mere, echegbula onwe gị gbasara inweta ego zuru ezu. Ọ bụrụ na ị dị njikere irite ego zuru oke karịa nbudata Games Kharido In App na ibe a.
More Banyere Egwuregwu Kharido Na Apk
Dị ka anyị tụlere na mbụ na ọ bụ ihe egwuregwu egwuregwu ntanetị mepụtara na-elekwasị anya gam akporo gamers. Ndị na-achọ ebe ikpo okwu dị n'ịntanetị ebe ha nwere ike ịzụta ego ịgba chaa chaa. Maka ịzụta ngwaahịa dị iche iche egwu egwuregwu gụnyere Skins na mmetụta.
N'ihi ya, a na-ahazi ikpo okwu ilekwasị anya egwuregwu niile nke android. Ma ugbu a, nyiwe ahụ na-ejide Free Fire Top Up ohere iji nweta 100% ego. Ndị FF Gamers ndị ahụ dị njikere ịzụta diamond ahụ gụnyere mgbakwunye zuru ezu ga-aga na ngwa ahụ.
aha Egwuregwu Kharido Na Apk
Aha ngwugwu com.games.kharido
Achọrọ gam akporo 4.1 na gbakwunyere
N'ihi na ohere a bụ maka obere oge. N'ihi ya, ndị na-atụ uche a ohere ghara inwe ike irite zuru daashi ọzọ. Cheta na usoro ịkpata ego pere mpe maka ndị anaghị adị ọhụụ ma ghara inweta ohere a dị elu.
E nwere ụfọdụ isi ihe ndị FF gamers kwesịrị ịghọta. Ka e were ya ma ọ bụrụ na onye na-egwu egwuregwu na-ahọrọ iji 500 zụta dayamọnd 500. Mgbe ahụ a ga - enye ya ka ọ ga - enweta XNUMX diamond maka ego n'efu.
Ndi na eji azuma ahia zuta ola diamond ma ha anataghi ego ahu. Nwere ike iji aka gị kwuo maka ego ha. All mkpa ka ị na-aga Omume taabụ ma họrọ ihe omume. Wee họrọ nhọrọ ego ma kwuo ya. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị, gaa na Games Kharido Top Up.
Etu ị ga-esi nweta ego na ngwa egwu dịka egwuregwu Kharido
Dịka e kwuru n’elu na ebe a anyị ga-ekwupụta usoro ọ bụla iji nweta ego zuru ezu. Ya mere, soro ndị a kpọtụrụ aha n'okpuru nke ọma. Ọ ga - eduga onye egwuregwu ahụ iji nweta 100% ego n'efu n'enweghị mbọ ọ bụla.
Nke mbụ, budata ụdị emelitere nke ngwa Apk site na ebe a.
Ugbu a wụnye ya n'ime ekwentị gị.
Mepee ngwa ọ ga-adọkpụrụ gị gaa na peeji nke isi.
Họrọ Garena Free Fire Gameplay.
Banye na egwuregwu site na iji ID ID ma ọ bụ Facebook.
Ozugbo ị nbanye n'ime ikpo okwu egwuregwu.
Ugbu a gaa na mmemme taabụ ma họrọ oge ahụ.
A ga-egosipụta ndepụta dị ogologo na ihuenyo ahụ na onyinye dị iche iche.
Họrọ onyinye ma zụta diamonds.
N'ime ịzụta diamonds site na App, a ga-etinye ego ahụ na akaụntụ egwuregwu gị.
Etu esi ebudata ngwa
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ibudata ụdị emelitere nke faịlụ Apk. Ndị ọrụ gam akporo nwere ike ịtụkwasị obi na weebụsaịtị anyị n'ihi na anyị na-ekerịta ezigbo ngwa ngwa. Iji jide n'aka na onye ọrụ ga-ọbịa na nri ngwaahịa.
Ndị otu ọkachamara anyị wụnye faịlụ Apk karịa ngwaọrụ dị iche iche. Ma jide n'aka na ngwa egwuregwu eji egwu egwu enweghị malware tinyere arụ ọrụ zuru oke. Maka nbudata ihe egwuregwu kachasị ọhụrụ nke Games Kharido. NA biko pịa njikọ nyere.
Ndị nwere mmasị na ịgagharị ụdị ngwa ahụ. Ga-agarịrị na njikọ ndị a kpọtụrụ aha n'ihi na a na-ejikwa ndị ahụ azụrụ ụdị egwuregwu egwuregwu egwuregwu dị iche iche. Nke gunyere Codashop Pro 2020 ngwa ngwa na CodaShop ngwa.
Nke a bụ ohere kachasị mma maka ndị na-agba ọkụ na-akwụghị ụgwọ iji nweta diamonds n'efu na ego 100%. N'ime FF Top Up nke mbụ site na iji usoro a kpọtụrụ aha. Ọ bụrụ na ị dị njikere irite ihe ruru 1000 diamonds n'efu wee wụnye Games Kharido In Apk n'ime ama gị.
Kechioma Spin Free Fire Apk [Chance Iji Nweta Free FF Skins]
Onyinyo VIP ngwa Download N'ihi na android [Na-arụ ọrụ]
Dias Generator Apk Download N'ihi na android [Unlimited Diamonds]
Categories Ngwaọrụ Tags Ngwa dị ka egwuregwu Kharido, Egwuregwu Kharido Na Apk, Games Kharido Na Ngwa, Egwuregwu Kharido Top Up, Egwuregwu Kharido. N’ime Mail igodo
Paytm Golden Gate Apk Download Maka gam akporo [Versiondị Ọhụrụ]
MBit Music Apk Download Maka gam akporo